UVince McMahon uthumele i-jet yakhe yabucala ngezixhobo zenkcenkce - Wwe
UVince McMahon wathumela eyakhe i-jet yabucala nje ukuzisa i-WWE legend's gear gear
U-Hulk Hogan usandula ukuveza ukuba uVince McMahon umthumele kwijethi yakhe yangasese ukuba ayokufumana iiringi zeHulkster ukusuka eTampa ukuya eCanada emva komdlalo wakhe neThe Rock eWrestleMania 18.
Vula Emva kwentsimbi , UCorey Graves wabuza uHulk Hogan ukuba icebo kukuba abuyele kwisinxibo sakhe esibomvu nesimthubi emva komdlalo wakhe neThe Rock eWrestleMania. U-Hogan uthe yayingelilo icebo lokuqala kwaye batshintshe izicwangciso ngokulandela indlela engalunganga yokuphendula.
umfazi wam akazufumana msebenzi
Uthe uVince McMahon wamyalela ukuba eze nesinxibo sakhe esibomvu nesimthubi kwiRAW emva kweWrestleMania, eyayiza kwenzeka ngosuku olulandelayo:
Isandla sam sanyanzelwa. Kwaye inyani mayixelelwe, ndaphantse ndaphoswa nguMvulo wooMsombuluko RAW eMontreal. Nokuba kungasiphi na isizathu, ukuba ubuyela umva esihlweleni, bekungama-50-50, kodwa njengoko umdlalo ubunxiba, ukuba umamela nyhani ukuba ngubani na omvuyisayo, ufumana isuntswana lomdlalo. Ndiphume eringini kwaye uVince uya, 'Ziphi izinto zakho ezibomvu nezityheli?' Ndathi, 'Andinayo nam.' Ndithe, 'iseTampa,' kwaye uyahamba, 'Ndithumela umntu ukuba ayokuyifumana.' Ndathi, 'Hayi, ngekhe uyifumane. Ndinayo le ndlu iphambeneyo engama-22,000 sq.Ft, ipakishwe kude, kwaye kunye nezinto endizifunayo, ndinento ethile (izinto), awungekhe ubambe iibhutsi ezityheli kunye neethayithi kunye nentloko. Kukho izinto ezindilinganayo kwaye ezingandifanelanga ngokufanelekileyo.
U-Vince wandibeka kwi-Challenger yakhe (jet yabucala), ndabuya ndabuya ngobo busuku, ndafumana izinto ezibomvu nezityheli, ndabuya ndabuya. Yayiyindiza yokugqibela eyafika eMontreal, baba nesaqhwithi sekhephu ngobo busuku. '
Iposi ekwabelwana ngalo ngu-therock (@therock)
UHogan uthe khange asebenzise iiringi ezibomvu nezimthubi zeringi kule RAW yasebusuku elandelayo.
UVince McMahon vs Hulk Hogan eWrestleMania 19
UVince McMahon kunye noHulk Hogan
ndiyamthanda nyani okanye ndindedwa
Kunyaka emva kokubuyela kwakhe kwiWWE kunye nomdlalo we-icon kunye neLiwa, uHulk Hogan wayenomnye umdlalo weWrestleMania, ngeli xesha ngokuchasene noVince McMahon.
Aba babini bajongana okokuqala ngqa, kumlo wasesitalatweni. UHogan uphumelele emva kokufika kwimilenze embalwa kuVince McMahon.
3/30/03: IHogan enegazi enegazi ngokuchasene noVince McMahon, ngaphambi kokuba ekugqibeleni imshiye nemilenze emithathu. pic.twitter.com/yRFcRRGlou
-I-OVP -I-Retro Wrestling Podcast (@ovppodcast) Ngomhla wamashumi amathathu ku-Matshi 2021
Nceda H / T Emva kweBell kunye neMidlalo yezemidlalo ukuba usebenzisa ezinye zeekowuti ezingasentla.
izinto ezenziwayo ukuba uzenze xa udikiwe
UDan noPhil batshatile
ukuthandana nomntu osandula ukudibana naye
ukumisa njani into engaqhelekanga yolawulo